Tanzania na-achụ nta maka ndị njem nleta na họtelu njem nleta n'isi obodo ọhụrụ ya
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Tanzania na-achụ nta maka ndị njem nleta na họtelu njem nleta n'isi obodo ọhụrụ ya
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
nyerere square na dodoma isi obodo ọhụrụ
Gọọmentị Tanzania ewepụtala ohere itinye ego maka ụlọ nkwari akụ dị elu na isi obodo Dodoma ọhụrụ, na-ezube ịdọta ndị ọbịa na ndị na-etinye ego na mba ọhụrụ ahụ, na-enweghị ezigbo ụlọ obibi.
Isi obodo ọhụrụ nke Tanzania enweghị ụlọ nkwari akụ nwere ụkpụrụ dị mma iji nweta ndị nnọchi anya mba, ndị isi azụmaahịa mba ụwa, na ndị isi nọ n’ọkwá dị elu na-agagharị n’obodo ahụ maka nnọkọ azụmahịa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke ọchịchị.
N’agbanyeghi onodu ya ugbua, Dodoma aburula nke nwere ulo nkwari ato nke ato klas ato. Ndị a bụ Fantasy Village (ime ụlọ iri abụọ na abụọ), Nashera Hotel (ime ụlọ iri ise na abụọ), na Dodoma Hotel (imeụlọ iri atọ na itoolu).
Onye osote Mịnịsta na-ahụ maka ihe ndị sitere n'okike bụ Maazị Constantine Kanyasu ekwetala na ya hụrụ isi obodo ọhụrụ nke Tanzania na-enweghị ụlọ ọrụ mba ofesi, Five Star.
Kanyasu kwuru na gọọmentị na-adọta itinye ego ugbu a na họtel, na-achọ ibuli ọnọdụ nke isi obodo ọhụrụ ahụ.
Obodo Dodoma nwere naanị ime ụlọ 428 na ụlọ nkwari akụ 24 ya na-enye ebe obibi nke klas atọ.
Kanyasu kwuru na gọọmentị ekenyela mpaghara maka owuwu nke ụlọ oriri na nkwari akụ na ụlọ ọrụ ndị njem ndị ọzọ, na-achọ ibuli ọnọdụ nke isi obodo ọhụrụ nke Tanzania.
Gọọmentị Tanzania weghaara ọrụ ọchịchị na gọọmentị ya niile na Dodoma yana ndị ministri niile na ngalaba ndị isi.
Dar es Salaam, ugbu a bụ obodo azụmahịa nke Tanzania bụ isi obodo nwere ụlọ nkwari akụ 242 nke ụkpụrụ mba ụwa, sitere na klas atọ ruo ise Star.
E nwere ụlọ nkwari akụ 177 e mere ka klas nke otu ruo atọ, 31 klas nke anọ nwere klas, na 19 Five Class Class, ha niile guzobere na Dar es Salaam nwere ọnụ ụlọ 24,000.
Ugbu a Tanzania na-eleba anya na ogbako na Nzukọ ndi njem iji mee ka otutu ndi mmadu bia.
Ka ọ dị ugbu a, na mmejuputa iwu, Tanzania Tourist Board (TTB) ezubere iji dọta nzukọ na ndị ọbịa na-azụ ahịa ka ha nwee nzukọ ụwa na Tanzania, na-ezube ịdọta ndị ga-abanye ụlọ nkwari akụ, ọkachasị na Dar es Salaam, Arusha na obodo ndị ọzọ gụnyere isi obodo ọhụrụ ahụ. Dodoma.
Ministri na-ahụ maka njem nlegharị anya na TTB na-arụkọ ọrụ iji dọta nzukọ na ihe omume ga-eme na Tanzania ebe ndị ga-eso ụlọ akwụkwọ ga-adọta ụlọ nkwari akụ wee dọtakwuo itinye ego na ụlọ ọrụ nkwari akụ iji mụbaa ọnụ ọgụgụ nke ime ụlọ ihi ụra na ụlọ ọrụ ọgbakọ.
Conferencelọ Ọrụ International Conference Center (AICC) na Julius Nyerere International Convention Center na Dar es salaam bụ ụlọ ọrụ ogbako abụọ na Tanzania na ikike iji nwee ọtụtụ nzukọ n'otu oge.
AICC nwere ụlọ nzukọ 10 nwere ikike ịnọdụ ala site na 10 na ime ụlọ nkwụsị ruo ndị nnọchi anya 1,350 na nnukwu ụlọ mgbakọ. Onu ogugu onu ogugu nke ulo nzuko nile mgbe eji ya bu ihe ruru ndi 2,500.
Centerlọ Ọrụ ahụ na-anabata nzukọ 100 kwa afọ na ngụkọta nkezi nke ndị nnọchite ogbako 11,000 kwa afọ, ọkachasị nzukọ mpaghara nke gọọmentị Tanzania haziri.
Na mpaghara, e gosipụtara Rwanda na South Africa ịbụ ndị isi mba Afrịka na-eme njem nleta na Southern Africa Development Community (SADC) na mpaghara East Africa Community (EAC)
N'etiti Tanzania, Dodoma bụ isi obodo nke Tanzania. O nwere onu ogugu ndi mmadu karịrị 400,000 na-eme ya obodo nke anọ kachasị na Tanzania ma ọ bụ ebe ụlọ omebe iwu nke mba ahụ nọ.
Obodo a dị na Great North Road nke jikọtara Cape Town na South Africa na Cairo na Egypt, ama ama maka ndị njem nleta na-akwọ ụgbọala site n'akụkụ ndịda nke Africa ruo n'akụkụ ugwu nke kọntinent ahụ.
N'ihe dị nso na njem njem njem ugwu ugwu Tanzania na isi obodo Kenya na Nairobi, Dodoma achọpụtala ebe ndị njem nleta na-ehi ụra.
Dodoma nwere ulo oru ugbo mara mma na ulo oru mmanya na-eto eto, nke nwere obere oru ugbo kachasi n'ime obodo. Ugwu a na-acha anwụ na-adọrọ mmasị na Safari. Ọ nwere ọtụtụ anwụ na-acha n'afọ niile na-eme ka ezumike bụrụ ihe na-akpali akpali.
Nkume Odum, ihe di omimi nke di n’ime obodo, na-eme ka ndi mmadu mara mma nke n’eme ka ha cheta ihe osise a ma ama, Eze Odum. Nkume ahụ na-ele Dodoma anya dị elu ma bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ. Ọ bụ ebe kachasị amasị ezinụlọ na ndị enyi.